Tilmaamaha: 38 Siyaabood oo Looga Fikiro Isticmaalashada Waxyaabaha Aad Ku Qoran Tahay Gurigaaga - Waxay Tilmaantaa Nabadda
ACCUEIL » VIDEOS TALOOYINKA: 38 FURSO OO AAD UGU ISTICMAALO ITOOBINTA GURIGAAGA
Waad la yaabi doontaa, laakiin saxamada barafka ayaa ah alaabo faa'iido badan waxaana loo isticmaali karaa siyaabo kala duwan. Inta badan isticmaalkooda samaynta jalaatada, laakiin sidoo kale waad sameyn kartaa macmacaan, bambooyin qubeyska, shumacyo iyo xitaa sushi! Fiiri fiidiyowgan si aad u hesho fikradan fudud laakiin weyn:
-Waxaad ka baabi'in kartaa ur aan la rabin goobaha goynta ah oo ay ku jiraan hal qayb. Ku barafeeya daawada cadayga ee saxanka qafiska barafka una isticmaal inaad nadiifiso boodhka goynta
-Haddaad jeceshahay bambooyinka qubeyska, gurigooda ku samee oo lacag badan badbaadi. Waad sameyn kartaa qaabab iyo midabo kala duwan. Waxaan wadaagnaa qaar ka mid ah cuntada sida loo xiiseeyo! Baaquli, waxaad ku dhex qastaa soodhada dubista, citric acid, qumbaha qumbaha, saliida lama huraanka ah iyo dheeha.
- Ku shub shukulaatada dhalaalay kuleylka qafiska barafka, ku dar berry aad jeceshahay oo u oggolow adkeyn. Macmacaan macaan ayaa diyaar ah!
-Waxaad sameyn kartaa shumacyo ka sameysan guryaha. Geli qalin qori oo ku dheji saxanka qafiska barafka, ku dabool shamac wax kareem ah. Meesha shumaca dhex dhig oo ha adkeyn
-Waxaad ku samayn kartaa xabadaha sushi oo ku jirta caaryada silicone! Dhadhan isku mid ah laakiin waqti iyo saad ka yar! Ku dar lakab avocado, shrimp, kalluun ama wixii qurxin ah ee aad jeceshahay! Bariiska ku dul faafi kalluunka kuna rid qaboojiyaha daqiiqadaha 20. Ku wareeji saxaradda sagxadda googoynta oo ku raaxeyso
-Ma jeceshahay samaynta dahabka? Soo hel waxbarid ku saabsan samaynta hilqado qurux badan
-Waxaad u isticmaali kartaa baaldi baraf ah oo ku bilaabaya abuur abuur
-Iska buuxso saxan baraf ah caleemo minit ah iyo casiir liin. Qaboojiyaha. Waxaad ku dari kartaa xabadahaan cabbitaannadaada
00: 09 Sida loo nadiifiyo boodhka goynta
00: 38 DIY Dabdamis
01: 31 shumacyada DIY
02: 05 Suugaanta jilitaanka
04: 43 Siyaabo farshaxan oo dib loogu adeegsado fekerka
Wixi fiidiyo iyo maqaalo ka badan, booqo: http://www.brightside.me
Cudurka Suuxdinta Muuqda: https://www.epidemicsound.com/ .
Tani waxay u muuqatay mid hore https://www.youtube.com/watch?v=GXSOE4FCNKU
Maxaa keenay Brexit? | Halkan ka bilow - VIDEO